Muwaadin Soomaali ah oo lagu dilay deegaanka Naas ee dalka Koonfur Afrika.
Ciidamo Turki ah oo markale lagu dilay Waqooyiga Suuriya.
Al Shabaab oo sheegatay Mas'uuliyadda weerarkii Dadka Kenyaanka ah lagu dilay ee ka dhacay Mandheera.
Ciidanka DF Soomaaliya oo 66 sano Kadib wata Astaantii Uu Gumeystihii Talyaaniga u sameeyay.
Toban kun oo ruux Shiinays ah oo qarka usaaran in ay udhintaan Cudurka Carona.
Sunday July 07, 2019 - 12:22:06 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dalka Koofur Afrika oo kamid ah wadamada ay Soomaalidu u badna yihiin ee qaaradda Afrika islamarkaana ka shaqeystaan ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay lagu dilay muwaadin Soomaaliyeed.
Wararka ka imanaya dalkaasi ayaa waxay sheegayaan in kooxo burcad Koofur Afrikaan ah ay degaanka Naas ee Gobolka Mpumalanga, ku dileen muwaadinka Soomaaliga ah oo lagu magacaabi jiray Xuseen Cali Saqiir.
Goobta lagu dilay waa xarun ganacsi oo uu ka shaqeynayay muddo 8 biloo ah sida aan kasoo xiganay dad xog ogaal ah. Wadankaas ayaa waxaa caadi ka noqday dilka dadka Soomaalida ah, waxaadna moodaa in Soomaalida halkaa ku dhaqan ay iyaguna la qabsadeen.
Soomaalida ayaa si caadi ah u aasta meydka hadba qofkii laga dilo waxaana arrintan cambaareeyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaaso. Dalkaas waxaa kale oo ku nool muwaadiniin u dhashayw adamo kale laakin iyagu looma dilo sida Soomaalida maxaa yeelay waxay leeyihiin dowlado rasmi ah oo u doodi kara, halka kuwa Soomaalidu aaney lahayn safaarad ama qunsuliyad arrimahooda ka shaqeysa.
Weerar dad Kenyaan ah lagu dilay oo ka dhacay gobolka Mandheera.
Cudurka Carona oo markii ugu horraysay dad ku dilay dalka Iiraan.
Weeraro Madaafiic ah oo lagu qaaday saldhigyo kuyaal degmooyinka Galgala iyo Buula Burde.